आयुष्मानको यो कस्तो शैली ? प्रियंकाको फोटो पोजको कपी गर्दा ट्रोलको सिकार बन्दै (फोटो सहित) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आयुष्मानको यो कस्तो शैली ? प्रियंकाको फोटो पोजको कपी गर्दा ट्रोलको सिकार बन्दै (फोटो सहित)
आयुष्मानको यो कस्तो शैली ? प्रियंकाको फोटो पोजको कपी गर्दा ट्रोलको सिकार बन्दै (फोटो सहित)
1,109 Less thanaminute
काठमाडौं/ अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीले अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई च्यालेन्ज दिँदै आफुले पनि ब्याचलर पार्टी मनाएका छन् । यही फागुन १५ गते अभिनेता आयुष्मान र अभिनेत्री प्रियंका विवाह बन्धनमा बाँधिदै छन् । विवाह मिति नजिकिएसँगै दुवै जनाले ब्याचलर पार्टी मनाएका हुन् ।
अभिनेत्री प्रियंकाले भने केही समय अगाडि नै थाइल्याण्ड पुगेर ब्याचलर पार्टी मनाइसकेकी छिन् । ब्याचलर पार्टी मनाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि प्रियंकाको व्यापक चर्चा भयो । आयुष्मानले पनि अहिले पोखराको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टमा पुगेर ब्याचलर पार्टी मनाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।
केटीहरुले पोज दिएर खिचाउने जस्तै फोटोहरु साथीहरुसँग खिचेर अभिनेता आयुष्मानले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । झट्ट हेर्दा ती फोटोहरु अपाच्य या भनौं नसुहाउँदो देखिन्छ । सोही फोटोहरुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तारिफ भन्दा बढी आलोचना भएको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उक्त फोटोहरुलाई ‘चटक’को संज्ञा दिएका छन् ।
एकै दिनमा थपिए ७ सय ४० जना कोरोना संक्रमित
पछिल्लो २४ घण्टामा ६१ जना डिस्चार्ज, हालसम्म ९७४ जना निको भए
थप २१० जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित १९२७३ मध्ये १४०२१ जना निको भए